Kiniiniyada ugu qiimaha-fiican ee 2017: moodooyinka 7 iyo 10-inji | Androidsis
Elvis bucatariu | | Kiniiniyada Android
Dhawr sano gudahood, kiniiniyadu waxay ku guuleysteen inay noqdaan qayb nolosheena ka mid ah, oo noqda aaladaha ugu fiican ee akhriska, marinka internetka, ku xirnaanta asxaabta shabakadaha bulshada, dhageysiga muusikada ama daawashada filimada.
Haddii aad horey u haysatid taleefan casri ah iyo laptop oo aad u baahan tahay qalab dhexdhexaad ah oo ku siinaya xoogaa dabacsanaan yar, kiniin wuxuu noqon karaa waxaad u baahan tahay. Maalmahan, si dhib leh kuma heli doontid guri aan lahayn kiniin ay wada isticmaalaan qoyska oo dhami. Haddii aysan ka badnayn hal.
Intii lagu gudajiray sanadihii uguhoreeyay kadib muuqaalka iPad-ka, suuqa kiniiniyada waxaa ku badnaa taliska Apple, inkasta oo ay inyar unyar soosaarayaasha kale bilaabeen inay dhulka soo ceshadaan, qaabkaas oo ah kan ugu sareeya kaniiniyada ugu fiican 2017 sidoo kale Waxay ahaayeen soo hel noocyo ku shaqeeya nidaamka hawlgalka ee Android oo aadan iska indhatiri karin haddii aad raadineyso kiniin cusub.
Qodobkan waxaad ka heli doontaa talooyin ku saabsan qaybaha ugu muhiimsan ee kiniiniyada: kuwa ugu yar, 7 inches, iyo kuwa 10 inches ama ka sareeya. Si loo fududeeyo xitaa akhrinta, labada qayboodba waxaan tusi doonaa oo keliya labada badeecadood ee leh qiimaha ugu fiican ee lacagta suuqa taal.
1 Astaamaha ugu muhiimsan marka aad iibsanayso kiniin
2 Qiimaha ugu fiican ee lacag 10 kiniin oo kiniin ah
3 Qiimaha ugu fiican ee lacag 7 kiniin oo kiniin ah
3.2 Dabka Amazon 7 (2017)
Astaamaha ugu muhiimsan marka aad iibsanayso kiniin
Waxaan bilaabi doonaa inaan muujiyo astaamaha ugu muhiimsan ee ay tahay inaad tixgeliso markaad doorato miisaaniyadda iyo howlaha caadiga ah ee aad u isticmaali doontid kaniinigaaga. Waxa kaliya ee kuu harsan inaad sameyso tallaabada xigta waa inaad isbarbar dhig ku sameysid tilmaamaha farsamada iyo dib u eegista iibsadayaasha horey u soo iibsaday alaabtan si ay u arkaan sida ay u shaqeeyaan.
El nidaamka hawlgalka Waxa ugu caansan suuqa kiniiniyada waa midkood midda Android ama IOS, waqtigan la joogona way adag tahay in la yiraahdo labadaas midkee baa fiican. Labadaba waan istcimaalay waxaanan aaminsanahay in qof kastaa la qabsan karo dhibaato la'aan.
Qaarkood waxay i weydiin doonaan sababta aanan u xusin kiniiniyada Windows runtiina waa inaanan sheegin sababta oo ah moodooyinka raqiiska ah ee kiniiniyada Windows weligood uma kici doonaan heerka waxqabadka la filayo, iyo dusha sare ee dusha sare ayaa si fudud uga badan 1000 euro, marka lagu daro waxay u eg yihiin sida buugaagta qaddarinta kiiboodh.
Sifooyinka kale ee la tixgelinayo ayaa runtii ah xaddiga Xusuusta RAM, gaar ahaan marka la eego kiniiniyada Android, maaddaama moodooyinka leh iPad-yada ay u muuqdaan kuwo ka waxtar badan kiiskan xitaa markay leeyihiin RAM yar. Ugu yar ee la doortaa waa 1.5GB oo RAM ah (2GB ayaa lagu taliyay) sanadka 2017-2018. Waxa kale oo jira kiniinno leh 3GB ama 4GB oo RAM ah, in kasta oo waxqabadka uusan kordhinaynin wax qiil u leh qiimahiisa sarreeya.
Dhinaca kale, xallinta shaashadda iyo isku xirka xogta sidoo kale waa laba dhinac oo aad u xiiso badan. Kuwa ugu badan ee lagu taliyay ayaa ah shaashadaha leh xalka ugu yar ee Full HD (1920 x 1080 pixels), oo ku filan xitaa shaashadda 10-inji. Hufnaanta sawirka ayaa sidoo kale saameyn ku leh nooca guddiga, laakiin inta badan moodooyinka xallinta sare waxay leeyihiin teknoolojiyada xallinta sare. IPS ama AMOLED.
Sida for isku xirnaanta xogtaIn kasta oo dhammaan kiniiniyada ay ku xirmaan internetka iyada oo loo marayo WiFi, haddana waxaa kale oo jira noocyo leh isku xirnaanta 3G / 4G, kuwaas oo adeegsada kaarka SIM si ay u galaan shabakadda marka WiFi aan la helin. Aniga shaqsi ahaan lacagteyda kuma maal galin laheyn nooc noocan ah, maadaama ay badanaa ka qaalisan yihiin moodooyinka aasaasiga ah ee Wi-Fi.
Qiimaha ugu fiican ee lacag 10 kiniin oo kiniin ah
Halkan waxaan ku taxnaa qaar ka mid ah kuwa ugu fiican Kiniin 10 inji ah inaad iibsan karto maanta.
Haddii aad leedahay miisaaniyad xoogaa fudud, waxaad dooran kartaa nooc ka mid ah noocyada 'MediaPad M3' oo ay soo saartay shirkadda Huawei. Huawei Mediapad M3 Lite 10 waa nooca aan dooneyno inaan ku darno liiskan, maadaama ay tahay kiniin 10.1-inji ah oo leh shaashad IPS Full HD ah, processor-ka Snapdragon 435 oo ah 1.4 GHz (4 A53 buundooyinka 1.4Ghz + 4 A53 oo ku yaal 1.1GHz), 3 GB RAM xasuusta, 32 GB oo ah xusuusta gudaha iyo baytari ah 6600 Mah.
MediaPad M3 Lite sidoo kale wuxuu ku daraa a 8 megapixel camera gadaal leh autofocus iyo kamarad loogu talagalay sawirada iskudhafka isku midka ah, marka lagu daro nidaamka Android 7.0 Nougat ee ka shaqeeya EMUI 5.1 Lite lakabaynta qaabeynta.
Waa kiniin aan waxba ka hinaasi karin moodellada kale ee Premium oo aad si ficil ahaan ah u qaban karto dhammaan howlaha la xiriira mawduuca mawduucyada badan, oo ay ku jiraan soo saarista ciyaar kasta oo ka socota Play Store.
Qaabka labaad ee aan kugula talinayno qaybtaan ayaa ah Samsung Galaxy Tab A, oo ah kiniin 10.1-inji ah oo xallintiisa leh HD buuxa, 2 GB oo RAM ah, 16 GB oo ah xusuusta gudaha iyo processor-kiisu yahay 7870GHz octa-core Exynos 1.6.
Kiniiniga Samsung ayaa sidoo kale ku jira a 8 megapixel camera gadaal iyo kamarad hore oo 2 megapixel ah, iyo sidoo kale nidaamka hawlgalka ee Android 6.0 Marshmallow oo sanduuqa ka baxsan.
Labada kiniin ee Samsung iyo Huawei waxay leeyihiin naqshad tayo sare leh waxayna ku fiican yihiin dhammaan noocyada waxqabadyada is-dhexgalka ah, in kasta oo la barbar dhigo nooca Huawei, Galaxy Tab A xoogaa wuu ka awood yar yahay, wax aad ku ogaan doontid gaar ahaan waqtiga aad la shaqeyneyso barnaamijyo badan hal mar ama tabs badan.
Qiimaha ugu fiican ee lacag 7 kiniin oo kiniin ah
Haddii aad raadineyso kiniin xoogaa yar markaa waa inaad tagtaa Kiniin 7 inji ah ama 8 inji, taas oo ku filnaan doonta daawashada fiidiyowyada YouTube-ka inta aad socoto, halka ay fududaan doonto in la qaado oo gacanta lagu qabto muddo dheer adigoon daalin. Kadib waxaan kuu dhaafi doonaa laba ka mid ah moodooyinka leh tayada-tayada ugu fiican ee qaybtan.
La Lenovo Tab3 7 Plus Waa kiniin 7-inji ah oo 2 GB oo RAM ah, 16 GB oo ah xusuusta gudaha ah, processor Qualcomm Snapdragon 410 ah afar geeslaha 1.4GHz iyo nidaamka hawlgalka Android 6.0 Marshmallow.
Maxaa inta badan ka taagan kiniinkan oo leh 7 inji IPS HD shaashad ah waa in ay bixisaa a hab gaar ah oo loogu talagalay carruurta iyadoo ay suurtagal tahay in la xakameeyo gelitaanka dhammaan codsiyada iyo internetka, marka lagu daro bixinta kal-fadhiyo adeegsadeyaal badan si dhammaan xubnaha isku qoyska ahi ugu adeegsan karaan nidaamyadooda gaarka ah.
Dhinaca kale, Lenovo's Tab3 7 Plus sidoo kale wuxuu bixiyaa a 5 megapixel camera gadaal iyo 2 megapixel hore, oo lagu furayo aqoonsiga wajiga, 9-saac is-maamul iyo laba ku hadla oo leh teknoolojiyadda Dolby Atmos.
Dabka Amazon 7 (2017)
Amazon Fire 7 waa mid ka mid ah kaniiniyada ugu caansan qaybtan aaladaha 7-inji ah, inta badanna waxay ku mahadsan yihiin astaamaha madadaalada iyo qiimaha hooseeya.
cunt ismaamul ilaa 7 saacadood ah, Amazon Fire 7 waxay ku faantaa bandhig leh 1024 x 600 xalka pixel, 1 GB RAM, a 1.3GHz processor afar geesle ah iyo ilaa 16GB xasuusta gudaha ah.
Kiniinku wuxuu u shaqeeyaa si weyn u daawashada filimada, fiidiyowyada YouTube, ama xitaa dhageysiga muusikada. Khasaaradeeda kaliya ayaa ah inay leedahay nidaamka OS ee Fire OS oo aan haysan marin Google Play Store, marka lagu daro qaabka ugu jaban wuxuu la yimaadaa xayeysiin iyo talooyin ka yimaada Amazon, wax aad xallin karto haddii aad bixiso 15 euro oo dheeraad ah nooca adigoon xayeysiin.
Si kastaba ha ahaatee, Amazon Fire 7 waxay dhaaftay filashooyinka dad badan iyadoo ay weheliso iskudhaf wanaagsan oo kuwa ku hadla awood badan, ismaamul wanaagsan iyo waxqabadka wanaagsan ee qeybta warbaahinta. Xitaa waxay leedahay awood ay ku maamusho ciyaaraha badankood.
Fire OS waxay leedahay interface fudud inkasta oo aysan keenin fursado badan sida Android ama IOS, waa madal ku siin doonta fursadaha ugu muhiimsan si aad ugu raaxeysatid internetka adigoon qarash gareeynin.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkani uu faa'iido kuu ahaa adiga iyo had iyo jeer, haddii aad leedahay mid ka mid ah kiniiniyaddan, ha ka waaban inaad nala wadaagto wixii waayo-aragnimadaada ah ee iyaga la jirtay illaa hadda, ama xitaa waad soo jeedin kartaa soo-jeedinno moodooyinka kale ee ka mid ah qaybaha aan soo sheegnay. .
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Kiniiniyada Android » Kiniiniyada Qiimaha ugu Fiican 2017: Noocyada 7-Inch iyo 10-Inch